Home > Resource centre > Guidelines > Access to Information Manual > isiZulu
Access PDF version  [PDF] 107 kb
UMthetho Okhuthaza Ukutholakala Kolwazi, wonyaka wezi-2000 , ukubeka ngokucacile ukuthi uphiko ngalunye kumele luqoke Isikhulu Esengamele Ulwazi kanye Ne/Namaphini Le/Esikhulu Esengamele Ulwazi, okuyibona ababhekene nomsebenzi wokucubungula izicelo zokuthola ulwazi, futhi balekelele labo abafaka izicelo ukuthi bakwazi ukufaka izicelo zabo ngendlela efanele.
Leli bhukwana liyisiqalo sokusetshenziswa kwelungelo lokuthola ulwazi, elibekwe ngokucacile kuMthethosisekelo waseNingizimu Afrika, 1996  (Umthetho we-108 wonyaka we-1996).
I-SAHRC  (lapha ebizwe njenge ‘khomishini’) ngokweSigaba 10 se-PAIA, 2000, izohlanganisa incwadi ngokusetshenziswa kwalo Mthetho. Lo mhlahlandlela uyatholakala kwikhomishana. Nanoma iyiphi imibuzo ephathelene nalo mhlahlandlela kumele iqondiswe kwikhomishana ku:
Ulwazi olutholakala kwiwebsayithi ye-GCIS, www.gcis.gov.za , lutholakala kalula ngaphandle kokufaka isicelo sokuluthola. Eminye imikhiqizo nolwazi olushicileliwe olutholakala kalula ngaphandle kokufakwa kwesicelo ibandakanya:
Ifomu A: Isicelo Sokuthola ulwazi olugciniwe Lwesikhungo Sikahulumeni Isigaba 18(1) se-PAIA, 2000  (Isithasiselo b Sesaziso 187 Kusomqulu Kahulumeni Esikhishwe Mhlaziyi-15 Kunhlolanja 2002 [PDF] 151 kb
Source URL: https://www.gcis.gov.za/content/resource-centre/guidelines/paiamanual/isizulu#comment-0